Wepụtara imewe na akụkụ nke Samsung Galaxy S8 na S8 Plus | Gam akporosis
Anyị na-ekwu maka ọnwa ole na ole na ụdị ụgha na ezi asịrị niile na ha anọwo na-eru ihe ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị smartphone nke afọ a n'ihi Samsung nwere mmasị na ya ime ya; mgbe ihe mere na Galaxy Note 7 ha enweghị ihe ọ bụla ọzọ na-etinye ha niile anụ na imi ihe.
Ọ bụ ugbu a mgbe anyị ga-enweta ozi ziri ezi karị banyere ihe ga-abụ nhazi na oke nke Galaxy S8 na S8 Plus, ewezuga ịbịa si n’aka otu ezigbo aha; ọ dịka nke ahụ sitere na The Guardian gosipụtara anyị nkọwa niile kachasị mkpa nke ekwentị mkpanaka Samsung a nke ga-abata n'April ma gosipụta ya na Machị.
1 Akụkụ na imewe nke ihu
2 Ntuziaka di iche-iche di n’ahu
Akụkụ na imewe nke ihu
Anyị nwere imewe schematics dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi na ihe bụ ezi akụkụ nke Galaxy S8 na S8 Plus, corroborated site na onye akaebe nke anụ ahụ ọnụnọ nke igwe.
Dịka ị pụrụ ịhụ, akụkụ nke ihuenyo ahụ ruru 18,5: 9 ma ọ bụ dịka e kesara ya na ụfọdụ nzacha na nke ọzọ nke Evan Blass, ma ọ bụ @evleaks », izu gara aga. Site na-anọghị ihe bụ nkịtị home button na-aga na ihuenyo onwe ya, ọhụrụ Samsung phones ga-enwe akụkụ ruru akpọ usoro Univisium nke ga-egosiputa LG G6 na igba egbe ya. Ọ bụ otu usoro a ka edere usoro Netflix ugbu a, ya mere o nwere ihe kpatara ya.
Anyị ahụworị ọnọdụ ọhụrụ nke mkpisiaka nyocha nke a gafere n’azu iji nọrọ n’ọnọdụ eke ebe mkpịsị aka ga-adị mgbe anyị ji otu aka jide Smartphone a. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ga-ejigide ọdịdị elliptical nke ọ nwere ugbu a na bọtịnụ ụlọ S7 ugbu a, ọ bụ ezie na ọ ga-arụ ọrụ dị ka padị emetụ, karịa ihe enwere ike ịpị.
Ntuziaka di iche-iche di n’ahu
Nke a leaked image na-enyekwa nnukwu ihe ijuanya maka S8 na S8 Plus, na ọ dịghị ihe na-erughị ha nnukwu ihuenyo-to-ahụ ruru, ma ọ dịkarịa ala site n'ụkpụrụ Samsung dị.
Iji ike wepụ bọtịnụ ụlọ nkịtị, na ịbelata ọkpụrụkpụ nke bezels elu na nke ala, na-enye ohere itinye ihuenyo buru ibu nke dabara n'ụzọ zuru oke ma dị iche na nha nke achọtara na S7 ma ọ bụ S7 ihu. Otu ihe a kuziri na ndị ahụ e sere eserese na-eme ka anyị eze karịa maka inwe ezigbo onyonyo nke na-egosi anyị ike ọhụụ nke ọdụ Samsung a.
Isi iyi ahụ na-akwado na asịrị banyere 5,8 ″ na 6,2 ″ ngosipụta ha bụ eziokwu maka S8 na S8 Plus n'otu n'otu, mana ọ na-agbakwunye ihe ga-abụ okirikiri nke curvature nke belatara ma e jiri ya tụnyere ọnụ S7. Nke a nwere otu ebumnuche, nke ahụ bụ iji zere mmetụ ndị ahụ na-enweghị ihe kpatara ya.
Ngosipụta diagonal nke ihuenyo ahụ sụgharịrị ihe dị ka sentimita 5,6, nke ọ bụrụ na agbakwunye na bezels ndị ahụ dị oke mkpa, anyị ga-enwe smartphone nke yiri nha nke ihu Galaxy S7, opekata mpe ụdị S8 nkịtị, ebe onye nke ọzọ ruru 159 millimeters, 9 millimeters karịa nke gara aga.
Galaxy S8 Plus ga - enwe diagonal 6,2-inch, mana akụkụ ya ịtọ ụtọ na ọ na-anọ na 6,08 ″. Nha ihu na ihu ma ọ bụ ngebichi na-ahụ, ga - eduga na njedebe a ka ọ bụrụ kpakpando n'ụdị ọkọlọtọ a nwere obere bezels Inwekwu mmasị, ya mere, na-akpali ọnụ a nke ga-abata na bezels belata nke ọma n'akụkụ niile, isi ga-elekwasị anya na Galaxy S8.
Anyị ga-ahụ ihe Samsung na-echere anyị, ebe ọ bụ na enwere oke oke iji weta ozi ọma dịka enweghị bezels, na ndị ọzọ mgbe afọ abụọ gasịrị nke ọ họọrọ maka "onu" na obere ihe ọzọ a hụrụ banyere mgbanwe na imewe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-edozi nhazi na akụkụ nke Galaxy S8 na S8 Plus